चीनमा निर्मित खोपको प्रभावकारी परिक्षण, ट्रम्पले रिफर गरेको औषधीले मृत्युको जोखिम
चीनमा निर्मित खोप कोरोना भाइरसविरुद्ध प्रभावकारी र सुरक्षित देखिएको अनुसन्धानकर्ताले बताएका छन्। खोपको अनुसन्धानमा संलग्नहरुले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा खोप कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मानिसलाई जोगाउन सफल देखिएको र सुरक्षित पनि रहेको उल्लेख छ।
चीनका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको पहिलो चरणको ट्रायलको नतिजासहितको रिपोर्ट द ल्यानसेट जर्नलमा प्रकाशित भएको छ । सो प्रतिवेदन अनुसार चीनमा बनेको सो खोपले सकारात्मक नतिजा दिएको छ। १८ देखि ६० वर्षसम्मका १०८ जनामा भएको पहिलो चरणको परीक्षणको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको हो।
खोपको एक डोज मात्रै दिइएका व्यक्तिको शरीरमा दुई हप्ताभित्रै टी सेल्स नाम गरेको रोग प्रतिरोधात्मक कोशिका बनेको देखिएको छ । खोप दिएको २८ दिनमा प्रतिरोधात्मक क्षमताका लागि आवश्यक पर्ने एन्टिबडी उच्च तहमा पुग्ने देखिएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बोस्टनमा रहेको बेथ इजरायल डिकोनेस मेडिकल सेन्टरका डा. डान बारोउचले भनेका छन्, ‘यो अति सकारात्मक नतिजा हो, तर अझै अनुसन्धानको खाँचो छ । यो तथ्यांक प्रारम्भिक मात्रै हो । समग्रमा भन्दा अहिलेलाई यो अति सकारात्मक खबर हो ।’
खोपको पहिलो चरणको परीक्षणको मुख्य उद्देश्य मानिसलाई दिनु सुरक्षित छ कि छैन भन्ने थाहा पाउनु हो । तर सम्भावित खोपको पहिलो चरणकै परीक्षणमा सुरक्षित देखिनुका साथै कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्न सफल हुने देखिएको हो । खोपको प्रभावकारिता थप स्थापित गर्नका लागि हजारौँ मानिसमा परीक्षणको खाँचो पर्छ ।
अहिले विश्वभर कोरोना भाइरसको महामारी छ, संक्रमणबाट जोगिनका लागि धेरै देशमा लकडाउन लागु गरिएका छन् । केही देशमा लकडाउन खुकुलो बनाउन थालिए पनि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) सहित स्वास्थ्य विज्ञहरुले पुनः संक्रमण फैलिन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । खोपलाई कोरोना भाइरसविरुद्धको एक मात्र विकल्प ठानिएको छ । विश्वभर हाल कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप बनाउनका लागि विभिन्न टिमहरु सक्रिय छन् ।
गएको सोमबार अमेरिकी बायोटेक कम्पिनी मोदेर्नाले आफूले बनाएको खोप सुरक्षित र कोरोना भाइरसविरुद्ध प्रभावकारी रहेको देखिएको बताएको थियो । डा. डान बारोउचसहितको टोलीले बाँदरमा गरेको परीक्षणमा चीनको बेइजिङ्गमा रहेको सिनोवाक बायोटेक कम्पनीले निर्माण गरेको खोप दिएपछि कोरोना भाइरसको संक्रमण नभएको देखिएको थियो ।
अहिले मानिसमा सो खोप सुरक्षित र प्रभावकारी दिएको प्रतिवेदनमा ल्यानसेटमा प्रकाशित भएको हो। सो खोप एडी५ नाम गरेको भाइरसबाट बनाइएको वैज्ञानिकले बताएका छन् । सो भाइरसलाई मानव कोशिकासँग सहकार्य गर्नका लागि जेनेटिक इन्स्ट्रक्सन दिएर परिमार्जन गरिएको उल्लेख छ ।
कोशिकाले कोरोना भाइरस प्रोटिन बनाउन थालेपछि मानिसको प्रतिरोधात्मक क्षमताले प्राटिनलाई पत्ता लगाएर आक्रमण गर्न थालेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । एडी५ ‘कोल्ड भाइरस’ हो, धेरै मानिस यो भाइरसको सम्पर्कमा आएका हुन सक्छन् । अनुसन्धानमा संलग्न आधा मानिसलाई एडी५ का लागि शक्तिशाली एन्टिबडी दिएपछि मात्रै खोप दिइएको थियो ।
ती मानिसको प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ्न नसक्ने र खोपको प्रभाव स्पष्ट रुपमा कम देखिने गरेको डा. कर्स्टन लाइकले बताइन् । उनी युनिभर्सिटी अफ मेरिल्याण्डकी भाइरोलोजिस्ट हुन् र कोरोना भाइरसविरुद्धको खोपको अनुसन्धानमा उनले नेतृत्व गरिरहेकी छन् । चीनका अनुसन्धानकर्ताहरुले पनि एडी५ भाइरसको एन्टिबडी रहेका व्यक्तिमा सो खोप दिएपछि बलियो प्रतिरोधात्मक क्षमता बन्ने सम्भावना कम देखिएको बताएका थिए । एडी५ को एन्टिबडी नदिइएका व्यक्तिमा भने भाइरसको प्रभाव अति राम्रो र उत्साहजनक देखिएको छ ।
नेशनल स्कूल अफ ट्रफिक मेडिसिनको बेलर कलेज अफ मेडिसिनका डा. पिटर होटेजले भनेका छन्, ‘एडी५ भएका व्यक्तिमा एन्टिबडी दिनु पर्ने हुँदा यो खोपको प्रयोग एडी५ नभएका व्यक्तिमा मात्रै उपयुक्त हुने देखियो ।’ यस्तै यो खोपको प्रभाव युवामा बढी राम्रो देखिएको छ । डा. लाइकका अनुसार ४५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिमा भन्दा त्यो भन्दा कम उमेरका व्यक्तिमा खोपको प्रभाव राम्रो देखिएको छ । खोपको अनुसन्धान अझै बिस्तारित रुपमा गर्नु पर्ने अनुसन्धानकर्ताले बताएका छन् । बिस्तारित अनुसन्धानबाट मात्रै थप स्पष्ट हुन सकिने बताउँदै उनीहरुले प्रारम्भिक नतिजामा निश्चित अवस्था बाहेक खोपको प्रभाव उत्साहजनक देखिएको उल्लेख गरेका छन् ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन नदिन तथा संक्रमणमुक्त हुनका उपायोगी हुने भन्दै लगातार सुझ्याउँदै आएको औषधिले वास्तवमा संक्रमितको मृत्यु हुने जोखिम बढाउने देखिएको छ ।
द ल्यानसेट जर्नलमा प्रकाशित अनुसन्धान प्रतिवेदन अनुसार ट्रम्पले सुझाउँदै आएको होइड्रोक्सिक्लोरोक्वीनले बिरामीको मृत्यु हुने जोखिम बढ्ने देखिएको छ । मलेरियाविरुद्धको औषधि हाइड्रोक्सिक्लोरोक्वीनको प्रयोग कोरोना भाइरस संक्रमितको उपचारमा प्रयोग गर्दा कुनै फाइदा नहुने ल्यानसेटको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले केही दिनअघि कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट जोगिनका लागि आफूले हाइड्रोक्सिक्लोरोक्वीन औषधि खाइरहेको बताएका थिए । डाक्टर तथा स्वास्थ्य विज्ञहरुले गम्भीर चासो र चेतावनी दिए पनि ट्रम्पले लगातार सो औषधिले कोरोना भाइरसको संक्रमण निको हुने बताउँदै आएका छन् ।
अहिलेसम्म भएका कुनै पनि अनुसन्धान तथा परीक्षणहरुमा हाइड्रोक्सिक्लोरोक्वीनले कोभिड–१९ को उपचारमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिएको छैन । यो औषधि मलेरियासहित लुपस वा आर्थ्राइटिसको उपचारमा प्रयोग हुँदै आएको हो । तर अहिलेसम्म भएका कुनै पनि क्लिनिकल ट्रायलले हाइड्रोक्सिक्लोरोक्वीनलाई कोरोना भाइरस संक्रमितको उपचारमा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिएका छैनन् ।
ल्यानसेटले कोरोना भाइरसका ९६ हजार संक्रमितमाथि अनुसन्धान गरेको हो । त्यसमध्ये झण्डै १५ हजारलाई हाइड्रोक्सिक्लोरोक्वीन वा क्लोरोक्वीनको सम्बन्धित औषधि दिइएको थियो । यो औषधि एन्टिबडीसहित वा एन्टिबडी बाहेक दिइएको हो ।
अर्को समूहका बिरामीको तुलनामा हाइड्रोक्सिक्लोरोक्वीन दिइएका बिरामीको अस्पतालमै मृत्यु हुने वा मुटुको चाल असामान्य हुने समस्या बढी देखिएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अनुसन्धान प्रतिवेदन अनुसार हाइड्रोक्सिक्लोरोक्वीन दिइएका कोभिड–१९ का बिरामीको मृत्युदर १८ प्रतिशत, क्लोरोक्वीन दिइएका बिरामीको मृत्युदर १६.४ प्रतिशत तथा अरु समूहका बिरामीको मृत्युदर ९ प्रतिशत देखिएको छ ।
एन्टिबडीसहित हाइड्रोक्सिक्लोरोक्वीन वा क्लोरोक्वीन दिएर उपचार गरिएका बिरामीको मृत्युदर अझ बढी देखिएको अनुसन्धानमा उल्लेख छ । अनुसन्धानकर्ताले क्लिनिलक ट्रायल बाहेक हाइड्रोक्सिक्लोरोक्वीनको प्रयोग नगर्न चेतावनी दिएका छन् । ट्रम्पले भने आफू अहिलेसम्म कोरोना भाइरसबाट संक्रमित नभएको र हाइड्रोक्सिक्लोरोक्वीनले संक्रमण रोक्न सहयोग गर्ने सोचेर आफूले औषधि खाइरहेको बताएका थिए ।
हाइड्रोक्सिक्लोरोक्वीनको हाल अनुसन्धान भने भइरहेको छ कोरोना भाइरसको उपचार वा संक्रमण नियन्त्रणमा यसको प्रभावकारिता हेर्नका लागि । युरोप, अफ्रिका, एसिया तथा दक्षिण अमेरिकाका ४० हजार भन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मीलाई यो अनुसन्धान अन्तर्गत हाइड्रोक्सिक्लोरोक्वीन दिइएको छ । देशसंचार